Imaatinka Talyaaniga Sabab Shaqo | JumaMap
Sideed Talyaaniga loo soo gala shaqo awgeed?
Tirada dadka ajnabiga ah ee loo ogolaado
Talyaaniga haa’yad ama shaqsi u shaqeeya (oo ay
ku jiraan shaqo xilliyeedka ) ama shaqaale iskood u
shaqeysta ayaa lagu qeexay “kootada gelitaanka”
ee lagu aasaasay wareegtada qulqulka, taas oo
go’aamisa tirada ugu badan ee ajnabiga ah ee ka
socda wadamada saddexaad ee soo geli kara
Talyaaniga shaqo awgeed. Siduu sharcigu dhigaya,
waxaa suurtagal ah in sabab shaqo lagu imaan
karo xitaa hab ka baxsan kootada gelitaanka.
Waa maxay shuruudaha fiisaha shaqada xilliyeed?
Dal-ku-galka noocaan ah waxa codsan karaa dadka
haysta dhalashada mid ka mid ah dalalka lagu
tilmaamo sannad kasta Degreetada Madaxtooyada
ee Golaha Wasiirrada (DPCM) kaas oo jadwaleeya
socodka gelitaanka shaqada xilliyeedka oo keliya
qaybaha dalxiiska-hoteelada iyo beeraha: marka
ogolaanshaha shaqada soo baxda , shaqaalaha
ajnabiga ah waxay soomgeli karaan Talyaaniga oo
ay bilaawi karaan codsigooda ogolaanshaha
joogitaanka shaqada xilliyeedka.
Waa maxay shuruudaha fiisaha iskaa u shaqeysiga?
Dalku-galka iskaa-u-shaqeysiga wuxuu u
oggolaanayaa inay galaan Talyaaniga ajaanibka
doonaya inay qabtaan hawlo shaqo oo xirfad leh
isla markaan uu shaqadiisa uusan hoos iman
haa’yad ama shaqsi. Si aad u hesho fiisada nuucan
ah , waxa suurtagal ah in lagu tixgeliyo kootada
DPCM ee barnaamijka gelitaanka ama qulqulka
soo galootiga , ama ka baxsan habkaan , xitaa
haddii suurtogalnimada dambe ay aad u xaddidan
tahay ficil ahaan. Intaa waxaa dheer, waxaa lagama
maarmaan ah in la muujiyo inaad haysato
dhaqaale kugu filan, hawsha aad damacsan tahay
inaad qabato waa inaan noqon shaqo sharcigu u
fasaxaya kaliya in ay qabtaan muwaadiniinta
Talyaaniga ama muwaadiniinta Midowga Yurub.
47 Visite totali, 8 visite odierne
336 Visite totali, 7 visite odierne